Leverage Azụmaahịa | Etu esi eji ugwo maka uru ego bara uru! Ọnwa Nke Anọ 2021
Gịnị bụ leverage na Trading? Leverage Nkọwapụta na otu esi achọta onye na-ere ihe dị elu 2021
Veragezụ ahịa leverage, Ọ bụrụ na ị nwere ikike na ihe ọmụma achọrọ iji nwee ihe ịga nke ọma n'ahịa ahia n'ịntanetị, ma ị nwere agụụ dị elu maka ihe egwu - ị maara na ọtụtụ nyiwe ugbu a na-enye gị ohere ịzụ ahịa na leverage?
N'ime ụdị ya kachasị mkpa, ntinye ego na-enye gị ohere ịzụ ahịa karịa ego karịa na akaụntụ gị.
N’otu aka, nke a na - enye gị ohere ime ka uru ị bawanyewanye ma ọ bụrụ na ahịa baa uru. Agbanyeghị, azụmaahịa na ntinye ego jupụtakwara n'ihe egwu. N'ezie, ị nwere ike ịme ka akụkụ gị niile mmiri.
Dị ka ndị dị otú a, anyị ga-atụ aro ịgụ akwụkwọ ndu anyị Gịnị bụ leverage na Trading? N'ime ya, anyị ga-ekpughe ins na out of how to leverage trading works, onye tozuru etozu, ego ole ị ga-etinye, nsogbu ndị na-akpata, na ndị ọzọ.
Mara: EMSA kpebisiri ike ịgbazinye ego na UK - otu ndị Europe mebere iji kpuchido ndị na-azụ ahịa mkpọsa. Ga-enwe ike gafere oke ndị a ma ọ bụrụ na ị bụ ọkachamara na-azụ ahịa.
Gịnị bụ leverage Trading? Leverage Nkọwa na Nkọwa
Na nkenke, ahia na leverage na-enye gị ohere itinye ego karịa nke ị nwere na akaụntụ azụmaahịa gị. N'ime ime nke a, ị na-agbazi ego nke ọma n'aka onye na-ere ahịa na ajụjụ.
Na nloghachi, onye na-ere ahia ga-akwụ gị ọmụrụ nwa na ego gbaziri ego, nke a maara dịka 'ego abalị'. Dị ka aha ahụ na-egosi, a na-ebo ebubo a kwa ụbọchị ma ọ bụrụhaala na ndị ahịa gị na-akwụ ụgwọ.
Leverage na-enye gị ohere ịkwalite nha azụmaahịa gị site na ihe akọwapụtara tupu oge eruo. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ịchọrọ ịgbakwunye leverage iji zụọ ahịa na ọla edo. Orindailly, ị ga - enwe ike ịnye iwu ka ego ma ọ bụ pekarịa akaụntụ gị.
Agbanyeghị, site na itinye ntinye nke 3: 1, ị nwere ike ịzụ ahịa na ọnụọgụ okpukpu atọ. Nke a pụtara na balance 300 itule ga-ekwe ka azụmaahịa nke £ 900 na ọla edo. N'akụkụ tụgharịa, leverage bụ nnukwu ihe egwu, ebe ị nwere ike ịmacha 'oke' gị ma ọ bụrụ na azụmaahịa ahụ megidere gị.
Ka anyị leba anya n’ihe atụ banyere otu ahia ahia ga-esi rụọ ọrụ.
Leverage Trading Ihe Nlereanya
Ka anyị kwuo na ịchọrọ ịzụ ahịa FTSE 100. Mgbe ị tụlesịrị chaatị ndị a, ị kwenyesiri ike na FTSE 100 nwere ike ịbawanye na ọnụahịa karịa 24 awa na-esote. Dịka, ị kpebiri ịgbakwunye leverage nke 5: 1 na ahia gị.
I nwere £ 500 na akaụntụ ahia gị
Apply na-etinye mpempe akwụkwọ nke 10: 1, nke pụtara na azụmaahịa gị ruru £ 5,000
Mgbe e mesịrị na ụbọchị ahụ, ọnụahịa nke FTSE 100 na-abawanye site na 3%
Dị ka ọ dị, iwu £ 500 gị ga-eweta £ 15 na uru (£ 500 x 3%)
Agbanyeghị, ka ị na - etinye mpempe akwụkwọ 10: 1, uru gị dị na £ 150 (£ 15 x 10)
Dịka ị pụrụ ịhụ site na ihe atụ dị n'elu, itinye ihe nkwụnye ego nwere ike ịbawanye uru gị mgbe azụmaahịa ahụ masịrị gị. Agbanyeghị - ka anyị na-ekpuchi ngalaba na-esote, ntinye ego nwekwara ike ịbawanyewanye gị losses.
Kedu ihe bụ uru na ọghọm nke ịzụ ahịa azụmaahịa?
Na-azụ ahịa karịa ihe ị nwere na akaụntụ ahịa gị
ESMA ga - enyere gị aka ịzụ ahịa rue 30: 1 na isi ụzọ abụọ
Mee ka uru gị dịkwuo mma mgbe azụmaahịa na-aga nke ọma
Maka ndị ahịa na ụlọ ahịa
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-enye nchedo adịghị mma
Vezụ ahịa a na-akwụ ụgwọ dị elu
Ihe ize ndụ nke ịkụnye ego - oke
Ọ bụrụ na itinye ihe mgbakwunye anaghị akwụ ụgwọ, anyị niile ga-eme ya. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, gịnị kpatara iji naanị £ 500 zụọ ahịa mgbe anyị nwere ike ịkwalite ahịa anyị site na 30: 1? Azịza dị mfe maka nke a bụ oke.
See na-ahụ, iji nweta ego site n'aka onye na-ere ahịa n'ịntanetị, ikpo okwu ga-arịọ gị ka ị tinye oke, nke na-arụ ọrụ dị ka nkwụnye ego nchekwa.
Rịba ama: Onye ahia gị ahọpụtara ga-ekwupụta ọnụahịa butere nke ga-eme ka azụmaahịa gị kwụsị. Nke a bụ ụgwọ ahịa gị ga-emechi na-akpaghị aka.
Onu ogugu nke a gha acho ka itinye dika nche ruru na ahia gi, na oke oke ichoro itinye.
Iji maa atụ, ka anyị kwuo na ịchọrọ ịzụ £ 10,000 na ọkwa leverage nke 10: 1. Nke a pụtara na oke gị ga-abụ £ 1,000 (£ 10,000 / 10). N'otu aka ahụ, £ 20,000 ahia na 5: 1 ga-achọ £ 4,000 na oke (£ 20,000 / 5).
Etufuo Oke Gị
Ozugbo etinyere oke n'akụkụ azụmaahịa gị a na-akwụ ụgwọ, ị na-eguzo n'ihe ize ndụ nke ịfufu ya ma ọ bụrụ na ọnọdụ gị ga-emegide gị. A maara nke a dị ka ịnwe iwu gị 'mmiri mmiri', nke pụtara na onye na-ere ahịa ga-emechi azụmahịa gị na akpaghị aka ma debe oke.
Yabụ kedu ka anyị si mara mgbe enwere ike iwepụ ahịa anyị? Ọfọn, agbanyeghị na ọnụọgụ ahụ ga-adị iche na onye na-ere ahịa na ụzọ, enwere ụzọ dị mfe iji rụọ ọrụ a. Ọ bụrụ na ị tinye leverage na ọkwa nke 10: 1, ahia gị ga-agba mmiri ma ọ bụrụ na iwu ahụ furu efu 10% na uru (1/10).
N'otu aka ahụ, azụmaahịa dị na leverage nke 4: 1 ga-emebi ma ọ bụrụ na ahịa ahụ furu efu 25% na uru (1/4).
Olee otú izere Liquid?
Iji zere ka ị gbanye ahia gị, enwere nhọrọ abụọ dịnụ. Can nwere ike mechie azụmahịa gị ma were ọnwụ ma ọ bụ ọzọ, mee ka oke oke gị dịkwuo elu.
Mechie Ahia Gị
Nhọrọ dị mfe bụ imechi ahia gị tupu ya eruo mmiri mmiri. Agbanyeghị na ị ka ga-efufu ego, ị nwere ike tufuo ihe na-erughị ịhapụ ahịa gị ka ịmepere ya. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị na-ere ahịa na 10: 1, yana oke of 200.
Iji dokwuo anya, ọ bụrụ na ahia gị gbadaa karịa 10%, ị ga-atụfu oke £ 200 gị. Site na nke ahụ, mgbe emechara ụbọchị, azụmaahịa gị belatara site na 5% na uru. Ọ bụrụ na ị mechie ahia ahụ, ị ​​ga-atụfu £ 100, nke bụ 50% nke oke gị (5% x 10: 1).
Agbanyeghị na lost 100 furu efu, ka elekere ole na ole gachara, ngwa ahịa ahụ belatara site na 5%, nke pụtara na isi mmiri 10% kpatara. A sị na ị jidere ya ma nwee olile anya kachasị mma, ị ga-atụfu oke gị - nke bụ £ 200.
Nhọrọ nke abụọ dịịrị gị bụ ịgbakwunye oke. Fọdụ ndị na-ere ahịa ga-ezitere gị ọkwa mgbe ị na-abịaru nso mmiri mmiri, na-ajụ gị ma ị ga-achọ ịbawanye oke oke gị. Ọ bụrụ na ịmee, nke a ga-eme ka ahia ahụ meghee ma nyekwa gị ohere iku ume.
Nhọrọ a dị mgbagwoju anya karịa ịmechi azụmahịa gị na akpaghị aka, yabụ, anyị akọwapụtala ngwa ngwa n'okpuru.
Ihe Nlereanya nke asingbawanye Ọnọdụ Gị
Ka anyị kwuo na ị na-ere ahịa Apple na oke, na ọkwa leverage nke 4: 1. Oke gị bụ £ 500, yabụ ị na-ere ahịa na £ 2,000 na ahịa ahịa. Zụrụ Apple ngwaahịa na ọnụahịa nke £ 180 kwa òkè. Nke a pụtara na ị ga - mmiri mmiri ma ọ bụrụ na ọnụahịa Apple gbadara £ 135 (£ 180 - 25%)
Apple wepụtara nsonaazụ ya kwa ọnwa, nke na-adịchaghị mma karịa ahịa ndị a tụrụ anya ya.
Dịka, ọnụahịa Apple na-agbada site na 24% karịa izu ole na ole sochirinụ.
Ọ bụrụ na ọnụahịa agbadata site na 1% ọzọ, a ga-agba gị mmiri.
Dị ka ndị dị otú a, ị kpebiri ịgbakwunye n'ihu £ 500 na oke.
Nke a pụtara na na ugbu a price nke £ 136.8, ị ga-ewetara onwe gị ọzọ 25% nchekwa net.
Ka o siri dị, naanị otu ụzọ ị ga - esi mee mmiri mmiri bụ ma ọ bụrụ ọnụahịa Apple gbadara down 102.6
Ihe atụ dị n'elu nke ịbawanye oke gị ga-ahapụ anyị ụzọ abụọ. Ọ bụrụ na ọnụahịa Apple mechara nwetaghachi karịa azụmaahịa mbụ gị nke £ 180 maka oke, ị gaghị abụ naanị uru, mana uru gị ga-abawanye site na ntinye nke 4: 1.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ọnụahịa Apple gara n'ihu na tankị, ọ wee mebie ebe £ 102.6 na-agbapụta mmiri, ị ga-atụfu akụkụ gị niile ma mechie ahịa abụọ. Nke a ga-abụ £ 1,000, ka ị na-etinye ego ala abụọ nke £ 500 n'otu n'otu.
Ego ole ka m ga-eji na-azụ ahịa?
Ọnụ ego ị ga-enweta mgbe ị na-azụ ahịa n'ịntanetị ga-adabere n'ọtụtụ mgbanwe. Nke a gụnyere ụdị akụ ị na-achọ ịzụ ahịa, ma ị bụ onye na-ere ahịa ma ọ bụ na-ahazi ụlọ ọrụ, ọnọdụ gị, yana onye na-ere ahịa n'onwe ya.
N'ụzọ dị oke mkpa, ọ bụrụ na ị bụ onye na-ere ahịa azụmaahịa nke dabere na UK, mgbe ahụ onye na-ere ahịa ga-ekwenye na iwu ndị European Securities and Markets Authority (ESMA) depụtara. Na nkenke, ụkpụrụ ndị a na-egosi ego ole ị nwere ike ịzụ ahịa ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-ere ahịa ahịa.
N'okpuru ebe anyị edepụtarala ihe nkwụnye ụgwọ dịka ESMA.
30: 1 maka isi Forex trading ụzọ abụọ
20: 1 maka ndị isi na-abụghị isi, gold, na isi indices
10: 1 n'ihi na ahia ahia ahịa ndị ọzọ karịa ọla edo na ọnụọgụ ndị na-abụghị isi
5: 1 maka mmadụ ahia ahia ahịa
Site na nke a, njedebe ndị a dị n'elu agaghị emetụta ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-azụ ahịa ọkachamara.
Oke mmụba dị elu maka Akaụntụ Ndị Ọkachamara Ọkachamara
Iji mepee akaụntụ azụmaahịa ọkachamara na onye ị họọrọ, ị ga-ezute opekata mpe abụọ n'ime akara atọ ndị a.
✔️ ✔️ mepee ma mechie ma ọ dịkarịa ala ahịa 10 na nke ọ bụla n'ime ụzọ anọ gara aga. Azụmaahịa ọ bụla ga-abụrịrị ihe ruru € 150.
Port Pọtụfoliyo ego gị ruru € 500,000 ma ọ bụ karịa
✔️ I nwere ma ọ dịkarịa ala otu afọ 'ahụmahụ dị mkpa n'ọhịa ego (dị ka ịrụ ọrụ maka onye na-azụ ahịa ma ọ bụ ụlọ akụ itinye ego).
Dị ka ị pụrụ ịhụ site n'elu, ihe achọrọ bụ 3 dịtụ nke onwe. Dị ka ndị dị otú a, onye na-ere ahia ga-achọ nyochaa ngwa ọ bụla mgbe ị na-ekpebi ma ị kwadoro gị dị ka onye ahịa ọkachamara. Ọzọkwa, ịkwesịrị inye akwụkwọ nkwado.
Ka o sina dị, ọ bụrụ na i mezuo ihe ndị a dị n'elu, ị ga-erite uru site na oke ikike itinye ego. N'ezie, nke a nwere ike ịdị elu dị ka 500: 1 na isi ụzọ abụọ, yana 100: 1 na isi indices dị ka S&P 500.
Kedụ ka m ga - esi nweta ego n’ahịa m?
Na imirikiti nke ikpe, gị họọrọ ore ahia ga-ekwe ka ị na-etinye leverage gị trades ka anya dị ka ị na-emeghe na akaụntụ. Otú ọ dị, nke a ga-abụ na ị na-egosi onye na-ere ahịa na ị ghọtara nke ọma ihe egwu dị na ya.
N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, a ga-achọ ka ị zaa ajụjụ dị iche iche dị iche iche mgbe ị gafere usoro ndebanye aha. Ndị a ga-adabere n'ihe egwu dị n'itinye ego na azụmaahịa gị. Ọ bụrụ na ị zaa ajụjụ ndị ahụ nke ọma, oke oke gị ga-arụ ọrụ na akpaghị aka.
Etu esi acho ahia ahia di elu?
Y’oburu n’inwe obi uto ibido igha ahia n’elu akuku, igha acho ichota onye ahia nke n’enyeghi gi ohere itinye ihe ozo n’eme ma gha eme ka ndi ozo choro. Na na kwuru, ọtụtụ agbanwe ekwe ka ị na-etinye leverage na ma Forex na Fzụ ahịa CFD ahịa, nke pụtara na ị ga-enwe ohere ịnweta ọtụtụ puku akụrụngwa ego.
O sina dị, anyị depụtara anyị n'elu 3 leverage ore ahia họpụta n'okpuru. Naanị jide n'aka na ị na-eme nyocha ndị ọzọ na onye na-ere ahịa tupu ịbanye.
1. eToro - Best Forex Broker maka Ndị Mbido
eToro na-eme ka ọnụọgụ anyị bụrụ otu ebe n'ihi na a na-ahazi ikpo okwu maka ndị nwere obere ahụmịhe na oghere azụmaahịa. Nke mbu, usoro ndebanye aha na-erughi nkeji 5, ma inwere ike itinye ego na debit / kaadị ego, e-obere akpa, ma ọ bụ nnabata ego. Naanị ezigbo Crypto dị na US.
N'ụzọ dị oke mkpa, ikpo okwu azụmaahịa dị mfe iji, ma ị nwere ike itinye aka na 'Detuo ahia'. Nke a bụ ebe ị idetuo ịzụta na ire iwu nke ndị ahịa azụmaahịa nwere akara na-edebanye aha na eToro. Get ga-ahọrọ ego ole ịchọrọ ịkụ mgbe ị na-edegharị ndị ahịa.
Ngalaba Forex ahụ n'onwe ya depụtara ikpo ego abụọ na ego gafee majors, umuaka, na exotics. Agbanyeghị na eToro dị mkpụmkpụ na ngalaba na-egosi teknụzụ, ikpo okwu na-enye gị ohere itinye mpempe akwụkwọ. Nke a ka etinyere na 30: 1 na majors na 20: 1 na umuaka / exotics - dika iwu ESMA.
Na-akwado ọtụtụ ụzọ ịkwụ ụgwọ gụnyere e-wallets
Readgbasa nwere ike ịdị elu na obere mmiri Forex forex abụọ
Na nchịkọta, itinye leverage nwere ike ịbụ atụmatụ azụmaahịa dị oke mma mgbe etinyere ya n'ụzọ ziri ezi. Dị ka ndị dị otú a, ị na-enwe ohere nke ịkọwanye uru gị mgbe ị nwere obi ike n'otu ohere ịzụ ahịa.
N'ikwu nke a, ịzụ ahịa azụmaahịa dịkwa oke egwu. Ọ bụrụ na ahịa aga n’akụkụ nke ọzọ nke ihe ị tụrụ anya ya, ị nwere ike tufuo oke gị.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị kpebie ịzụ ahịa na ntinye ego, ịkwesịrị ijide n'aka na ị ghọtara nke ọma nsogbu ndị na-akpata. Ọzọkwa, ịkwesịrị ijide n'aka na ị wụnye ezi uche nkwụsị-nkwụsị iji kpuchido ọnọdụ gị site na mmiri mmiri.
Gịnị bụ a elu leverage ore?
Dị ka aha ahụ na-egosi, nnukwu leverage na-ere ahịa bụ usoro ịzụ ahịa n'ịntanetị nke na-enye oke ikike itinye ego. Otú ọ dị, ndị na-ere ahịa enweghị ike ịhọrọ ego ole ha na-enye ndị ahịa nke ikpo okwu kwa, sị, dịka ESMA kpebisiri ike.
Ego ole ka m ga-enweta na onye na-ere ahịa na UK?
Oke a ghaghi ikwado na klas nke ichoro ahia. Dị ka ọ bụla ESMA - a na-agbanye ụzọ abụọ dị mkpa na 30: 1 maka ndị na-ere ahịa ahịa. Na nsọtụ ala nke ókèala ndị a, mkpuchi mkpuchi dị na 2: 1.
Kedu ka m ga-esi nweta ikike ikike mbuli elu?
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịzụ ahịa na oke nkwụnye ego dị elu, ị ga-emepe akaụntụ ọkachamara ọkachamara. Iji ruo eruo, ị ga-agbaso ụfọdụ njirisi, dị ka inwe pọtụfoliyo ego nke ,500,000 XNUMX ma ọ bụ karịa, yana opekata mpe otu afọ na ngalaba ego.
Enwere m ike mkpụmkpụ akụ na leverage?
Ọ bụrụ na leverage dị na nhọrọ ị họọrọ, ị ga-enwe nhọrọ nke ịga ogologo na mkpụmkpụ na azụmaahịa gị.
Kedu ka m ga-esi mara mgbe mmiri ga-agba mmiri?
Platformszụ ahịa azụmaahịa ga-eme ka ị mara mgbe ị ga - enweta oke ego. Dị ka ọnụ ọgụgụ bọlbụ, a na-agbakọ nke a site na ịtụgharị ihe nkwụnye ego dịka pasent. Dịka ọmụmaatụ, ntinye nke 10: 1 na 5: 1 ga-enwe isi mmiri nke 10% na 20%, n'otu n'otu.
Kedu ụgwọ ụgwọ ụgwọ?
Mgbe ị na-etinye leverage na ahịa gị, ị na-agbazinye ego n'aka onye ahịa ị họọrọ. Dịka, a ga-akwụ gị ụgwọ ego ị ga-eji abalị mee.
Kedu ihe ntinye ego na ebuka na mbak?
Y’oburu n’acho itinye ihe itinye ego na osisi na mbak, ikwesiri ime nke a site na CFD. Ka o sina dị, njedebe kachasị na ngwaahịa CFDs bụ 5: 1.
Emelitere ikpeazụ: March 22nd, 2021